I-Hurican IOTA High Hill Apartment ekwakhiweni kabusha
(96 okushiwo abanye)
Isla de Providencia, i-Colombia
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Claudia
Itholakala kahle. Ukubuka kolwandle nesundu. ISitudiyo Sangasese saba-2 esinekhishi elincane egqumeni - phakathi kwamabhishi angu-3 5 - 10 min ukuhamba, ingadi, ukuxhumana nomgwaqo wesiqhingi. Isuphamakethe, izindawo zokudlela, i-cine, ikhofi yobuciko ngaphakathi kwebanga lokuhamba. Indlu yabanikazi bakamakhelwane. Uhambo olunesitifiketi. Umhlahlandlela (uhambo lwezikebhe oluzimele, ukuhamba nge-snorkeling, ukutshuza, ukugibela izintaba, ukudoba, ukugibela amahhashi, ...).Amakamelo okulala engeziwe ayatholakala noma umatilasi we-additonal wezingane. Izinja zomndeni ezi-2 zizokwamukela nsuku zonke.
Itholakala endaweni entwasahlobo senzeka ukufuduka esiyingqayizivele cangrejos / izinkalankala. Lona umbukwane omangalisayo otholakala e-Providence kuphela.
Kuseduze kakhulu namabhishi amabili amangalisayo: ibhishi elilodwa lifana nencane yangasese futhi elingenamuntu noma abambalwa. Olunye ugu lolwandle olukhulu kunazo zonke esiqhingini elinabanakekeli be-hos ngezinye izimpelaviki kanye nebha emnandi ogwini lolwandle. Iyaphela ekuseni nakusihlwa. Izindawo zokudlela ziseduze...konke ongakufinyelela ngezinyawo. Okubi nje wukuthi ngonyaka odlule izinga lezithuthuthu belikhuphuka. Wonke amahhotela aseduze nomgwaqo wasesiqhingini okuwukuphela kwawo futhi kunomsindo ngamahora athile. Sizoqala iproyect yezokuthutha eqhubekayo maduze ngezithuthuthu ze-e uma sithola ukwesekwa yimeya.
4.88(96 okushiwo abanye)
4.88 · 96 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-96
Ikotishi lezothando laba-2 egqumeni eliphakathi kwamabhishi amathathu 5 - 10 imizuzu yokuhamba :
Ngibhekene nesihlahla esineminyaka engu-200 ubudala . Ithiyetha encane enekhefi itholakala ngokuphambene . Indawo yokubuka ogwini olude kunawo wonke esiqhingini - Saturday Horse Racing - iqhele ngemizuzu engu-3
Istudiyo siseduze kwendlu enkulu lapho kuhlala khona abasingathi . Okungenani oyedwa wabasingathi uhlala ekusayithi . Endlini enkulu , umshini wokuwasha ungasetshenziswa . Futhi ezinye izitsha zasekhishini zingacelwa . Omunye wabasingathi ungumqondisi wezivakashi futhi usehlale iminyaka engu-35 esiqhingini.
Istudiyo siseduze kwendlu enkulu lapho kuhlala khona abasingathi . Okungenani oyedwa wabasingathi uhlala ekusayithi . Endlini enkulu , umshini wokuwasha ungasetshenziswa . Futhi ez…
Inombolo yepholisi: 43691
Izilimi: English, Français, Deutsch, Português, Español